गाउँ नै लाने भैसक्यो पहिरोले, ओलिज्यु रेल लेराउन मै व्यस्त … हेर्नुहोस - info4nepal
पछिल्लो बर्साको कारणले गर्दा, कालिकोटमा गाउँ नै पहिरोले लग्ने जोखिम बढेको छ । कृपया सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन सक्दो पहल गराउ । यो पोस्ट पढ्नुहुने सबैले शेयर गरौ ।
वर्षाको समयमा लगातार पानी पर्न थालेपछि यहाँका बासिन्दा रातभर जाग्राम बस्ने गरेका छन् । ती गाउँमा कुनै पनि निकायले ध्यान नदिएको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् । वर्षौंदेखि सुक्खा पहिरोले सताएको पचालझरनाको खार्दु, शुभकालिकाको छाती र नरहरिनाथको माझगोठीमा समस्या आएको छ ।
लगातारको वर्षाले गर्दा तीन स्थानका बासिन्दाको निद्रा हराम हुने गरेको पचालझरनाका चम्फसिं बस्नेतले बताउनुभएको छ । उहाँका अनुसार सुक्खायाममा गएको पहिरोको डरले अहिले बस्तीका बासिन्दा गाउँमा भन्दा पनि गोठतिर स्थायी बसोबास गर्न थालेको दुई वर्ष भइसकेको छ ।
तलतिर गाउँ छ, माथिल्लो भाग दरार भएर जोखिमयुक्त गाउँमा बस्न असुरक्षाका कारण अधिकांश स्थानीयबासी खार्दुको गाउँ छाडेर डुंग्री, कांग्रे, डाँडागाउँ, खिब्लालगायतका ठाउँमा बसाइँ सरेको बताइएको छ ।
गएको वर्ष गोठमा बसेका स्थानीय हिउँदको समयमा घरमा आए पनि अहिले भने पुनः गोठमा फर्केका छन् । स्थानीय अर्जुन सुनारका अनुसार आफूहरुले पुनर्वासका लागि पहल चालेको भएपनि कुनै पनि निकायको ध्यान जान सकेको छैन ।
यस सम्बन्धमा शुभकालिका गाउँपालिकाका प्रमुख खडानन्द चौँलागाईले सो बस्तीका ११ घरपरिवारलाई वैकल्पिक व्यवस्थामा जोड दिएको बताउँदै अहिले अति जोखिममा रहेको अमृते सुनारलाई अन्यत्र व्यवस्था गरिएको र अन्य घरपरिवारलाई तत्काल उचित व्यवस्थापन गर्न लागेको बताउनुभएको छ ।
वर्षाको समयमा आफूहरु घर छोडेर बस्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको बताउनुहुन्छ स्थानीय टेकबहादुर विक ।
४० घर रहेको सो दलित बस्तीमा अहिलेसम्म गाउँपालिकालगायतका निकायमा बस्तीको जोखिम कम गर्नका लागि मागसहित पहल गरेपनि कसैको ध्यान नगएको बताउँदै जीवन विकले आफूहरुका लागि ध्यान दिने न त स्थानीय निकाय छ न त कुनै माथिल्लो सरकार, आफूहरुले राखेको माग पुनर्बास हो कुनै पनि निकायले ध्यान नदिएको जीवनको गुनासो रहेको छ ।
कालीकोट जिल्लामा विपद् व्यावस्थापनका लागि उच्च सतर्कता अपनाइएको कालीकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चन्दनाथ गौतमले बताउनुभएको छ ।
उहाँले उच्च जोखिममा रहेको शुभकालिकालगायतका अन्य क्षेत्रको बारेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आधिकारिक जानकारी केही नभए पनि जानकारी आएका ठाउँमा तत्काल व्यवस्थापन गर्ने बताउनुभएको छ ।
घुसिया नेता बङ्गलामा , रास्ट्रप्रेमी पत्रकार चाहिँ जेलमा?
चियापानमा मात्र ओली सरकारले सक्कायो ६ अर्ब ९४ करोड
गगन र डा. कोइरालाले कमाल देखाएपछि ओली–प्रचण्ड दिक्क
ranjan December 7, 2018
रबीले ७ करोडमा बनिएको पिचलाई हातैले उकाएर फालेपछि नेपालभर हलचल मचियो, टिम रबीमाथी गुण्डागर्दीको प्रयास(भिडियो )
ranjan April 22, 2018